सिनेमा – Tufan Media News
काठमाडौँ । पछिल्ल दिनमा नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह कता छिन् ? यो प्रश्न आम दर्शकको हो । फिल्म ‘ड्रिम्स’बाट रजतपटमा उदाएकी यी सुन्दरीले त्यसपछि राम्रो चर्चा त कमाईन् तर पछिल्ला दिनमा उनी गुमनाम जस्तै बन्दै गइरहेकी छिन् । भुवन केसी विरुद्ध ‘मिटु’को आरोप लगाउँदा मिडियामा छाएकी यी सुन्दरी पछिल्ला दिनमा कोरोनापछि क...
काठमाडौं– अभिनेता रमेश उप्रेती वि'वादमा तानिएका छन्। उप्रेतीले ‘ब'लात्का'र हुने बित्तिकै चिच्याउनुपर्छ’ भन्ने टिप्पणी गरेपछि वि'वादमा तानिएका हुन्। त्यसो त नेपाली कलाकारले कहाँ के बोल्नुपर्छ भन्ने हेक्का नराख्दा विवादमा तानिरहन्छन्। उप्रेतीबाट पनि यस्तै भयो। गत मंगलबार उनले एक टिभी कार्यक्रममा कुराकानीका क्रममा ...
‘कोहिनुर’ फेम्ड अभिनेत्री श्वेता खड्का मंगलबार नेपाली कांग्रेस प्रवेश गरेकी छन् । आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको छेकोमा पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले श्वेतासहित अभिनेता भुवन केसी र रविन्द्र खड्कालाई पार्टी प्रवेश गराए । अभिनेत्री खड्काले अबदेखि आफू सक्रिय राजनीतिमा लाग्ने बताएकी छन् । समाजसेवा, फिल्...
काठमाडौं । राम बाबु गुरुङको बहुप्रतिक्षित फिल्म ‘कबड्डी ४’को ट्रेलर रिलिज भएको छ । निर्देशक गुरुङ र उपेन्द्र सुब्बाले लेखेका ‘कबड्डी ४’को ट्रेलर बुधबार सुष्मा प्रोडक्शन ग्लोबल युट्युव च्यानलमार्फत् सार्वजनिक गरिएको हो । फिल्मको सार्वजनिक ट्रेलरमा यो पटक पनि मुख्य पात्र काजी (दयाहाङ राई)को विहे हुन्छ कि हुदैन भन्ने कुरा...
काठमाडौं / विवाहलाई गोप्य रुपमा सम्पन्न गरेकी अभिनेत्री वर्षा शिवाकोटीले प्राय गोप्य राखिने हनिमुनको स्थान भने सार्वजनिक गरेकी छिन । काठमाडौंमा गोप्य रुपमा विवाह गरेकी वर्षा हनिमुन मनाउन पोखरा पुगेकी छिन । उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफु हनिमुन मनाउन पोखरा पुगेको जानकारी दिएकी छिन । शुक्रवार आशिष गेलालसंग विवाह ब...
यी हुन आफै फिल्म बनाएर छोराछोरीलाइ फिल्म खेलाउने ४ सेलिब्रेटी, जसले रातारात हिट बनाए, करोडौ कमाए
काठमाडौं। काठमाडौँ – भनिन्छ, कला र संगीतको भूगोल हुँदैन। भाषा, सँस्कार फरक भए पनि भावले कला र संगीतकाे सीमा तोक्न दिँदैन। पछिल्लो समय विकास भएका प्रविधिले पनि विश्वलाई नै साँघुरो बनाइसकेको छ। हामी नेपाली भएर थुप्रै देशका चलचित्र हेर्छौँ, सबै भाषा हाम्रीले बुझ्ने हुँदैन तर हाउभाउ र भावभङ्गीले पनि चलचित्र बुझ्ने कसरत गछौ...
केकी अधिकारी पछि वर्षा सिवाकोटीले पनि यसरी सुटुक्क विवाह (भिडियो)
नायिका वर्षा सिवाकोटीको बिवाह सम्पन्न भएको छ । उनको अमेरिका बस्दै आएका प्रेमी आशिष गेलालसँग बिवाह भएको हो । विवाहलाई गोप्य राखेकी वर्षाका बिहेका तस्विर भने सार्वजनिक भएका छन् । टिकटकबाट चर्चामा आएका जुम्ल्याहा दिदी बहिनी प्रिज्मा पिन्सी आशिषको तर्फबाट जन्ती गएको बताइएको छ । विवाहमा सरिक प्रिजमाले इन्ट्राग्राममा बेहुला...
वर्षा शिवाकोटीले पनि आज यी ह्याण्डसमसँग बिहे गर्दै, को हुन् उनका हुनेवाला श्रीमान ?
काठमडौं-नायिका वर्षा सिवाकोटी आज विवाह बन्धनमा बाधिदै छन् । केही दिन अघि अमेरिका गएर फकिएकी उनले आज बिबाह गर्न लागेको बताइएको छ । नाम नखुलाएता पनि वर्षाका हुनेवाला श्रीमान अमेरिकामा बसोबास गर्द छन् । उनले पारिवारिक सदस्य र निकट साथीहरूको सानो जमघटमा उनले बिहे गर्न लागेकी हुन्। वर्षाको यस अघि राज कटुवार्लसँग नाम जोडिएक...
यी हुन एसियाबाट ३० वर्षमुनिका धनाढ्यको सूचीमा परेका रोहित तिवारी, जो बने केकी अधिकारीको श्रीमान
काठमाडौं :पर्दामा कयौं पटक बेहुली बनिसकेकी अभिनेत्री केकी अधिकारी बिहीवार वास्तविक जीवनमा बेहुली बनेकी छन् । बुधवार (हिजो) नै उनले विवाह गरेको खबर बाहिरिएको थियो । तर, बुधवार उनको मेहेन्दी सेरोमनी मात्र भएको थियो । बिहीवार उनले हिन्दू परम्पराअनुसार रोहित तिवारीसँग लगनगाँठो कसेकी हुन् । उनले फेसबुकमा विवाहका तस्विरहरु स...
अत्यन्तै हर्षित छु भन्दै अभिनेत्री केकी अधिकारीले सार्वजनिक गरिन बिहेका तस्विर
काठमाडौं : नायिका केकी अधिकारीले विवाह गरेकी छन् । केही समयदेखि रोहित तिवारीसँग प्रेम सम्बन्धमा रहेकी अधिकारीले आफूनिकट साथी र परिवारकाबीच विवाह गरेकी हुन् । उनले बुधबार बिहे गरेकी हुन् तर, अधिकारीले बिहेका तस्बिर भने बिहीबार मात्र सार्वजनिक गरेकी छन् । निकै गो’प्य रुपमा केकी र रोहितले बुधबार मेहेन्दी उत्सव गरेका थिए ...